Ururka al-shabaab ayaa werar ka geestay magaalada mandheera ee gobalka waqooyi bari kenya – STAR FM SOMALIA
Sida ay xaqiijiyeen Saraakiil ka tirsan Dowladda Kenya labo ruux ayaa ku geeriyootay labo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar rag hubaysan oo la aaminsan yahay inay Shabaab ka tirsan yihiin ay ku qaadeen Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, gaari bas ah oo maraayay.
Weerarka ayaa ka dhacay Deegaanka Dabacity ee duleedka Degmada Mandheera, kadib markii rag hubaysan oo Shabaab ka tirsan ay weerareen gaarigaan baska ah.
Labada ruux ee geeriyootay mid ka mid ah waa shacab halka mid kalena uu yahay Askari ka tirsanaa ciidanka Booliska.
Guddoomiyaha Deegaanka Dabacity Yunis, ayaa Warbaahinta u xaqiijiyay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen Shabaab.
Waxa uu sheegay ciidamada ammaanka inay ku raadjoogaan Shabaabkii ka dambeeyay weerarkaasi.
Al Shabaab ayaa sheegay inay iyaga ka dambeeyeen weerarkaasi ayna ku dileen sida ay hadalka u dhigeen Saraakiil ka tirsan Dowlada Kenya.